गिनीमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा, राष्ट्रपतिको अवस्था अज्ञात - VOICE OF NEPAL TV
गिनीमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा, राष्ट्रपतिको अवस्था अज्ञात
२१ भाद्र २०७८, सोमबार २१:१३
पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गिनीको सेनाले राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको छ । सेनाले त्यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति अल्फा कोन्डेलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको जनाएको छ । सेनाको घोषणाअघि राजधानी कोनाक्रीस्थित राष्ट्रपति भवननजिक दोहोरो गोली हानाहान भएको थियो ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेस र अफ्रिकी युनियनले सेनाको ‘कु’को निन्दा गर्दै राष्ट्रपति कोन्डेको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
गिनी प्राकृतिक स्रोतसाधनका दृष्टिले धनी मानिन्छ । तर, दशकौ लामो अशान्ति र व्यवस्थापनको अभावमा ती अमूल्य स्रोतसाधन खेरा गइरहेको छ ।
हिंसाबीच गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा कोन्ड‍े तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनी सन् २०१० मा पहिलोपटक विजयी भएका थिए । केही आर्थिक सुधारका पहल गरे पनि उनीमाथि मानवअधिकार हनन र आलोचकलाई दुव्र्यबहार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गिनीको अशान्तिकै कारण मोरक्कोविरुद्ध विश्वकपको छनाेट खेल पनि स्थगित भएको छ । सम्पूर्ण खेलाडी र खेल अधिकारीको सुरक्षाका लागि खेल स्थगित गरिएको फिफाले जनाएको छ । सेनाको ‘कू’ पछि मोरक्कोको फुटबल टिम स्वदेश फर्किन सकेको छैन ।
यसैबीच, सेनाको अपदस्थ प्रयासलाई राष्ट्रपतिका सुरक्षाकर्मीले विफल पारिदिएको रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
हिउँमा फसेर १२ पदयात्रीको मृत्यु
बाढीले जलमग्न भएपछि पकाउने भाँडामा चढेर विवाह गर्न गए जोडी !
अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको कोरोना संक्रमणले निधन
बेलायती सांसदको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या !
नोबेल शान्ति पुरस्कार पत्रकारद्वय रेस्सा र मेराटोभलाई प्रदान।
जब एयर इन्डियाको विमान पुलमुनी अड्कियो … (भिडियोसहित)
बलिउड कलाकार अनुपम खेर पशुपतिमा !